Unity Dambudziko rave kuwanikwa paApple Watch | Ndinobva mac
Unity Dambudziko rave kuwanikwa paApple Watch
Iyo nyowani Kubatana Dambudziko yave kuwanikwa kune vashandisi veApple Watch. Mazuva mashoma apfuura takataura nezvekuuya kwedambudziko iri kune vese vashandisi vane wachi yeApple uye ndivanaani zvine chekuita nekupemberera kweMwedzi Wevatema Nhoroondo.
Mune ino kesi, dambudziko ravanofunga ndere kungozadzisa pedyo rin'i yekufambisa kwemazuva manomwe akateedzana. Ehezve, aya marudzi ezvinetso ane vashandisi vazhinji vakasungirirwa uye zvine musoro zvinoita kuti hutano husimukire saka hapana mubvunzo sarudzo yakanaka yekutikurudzira kuti tifambe.
Mazuva mashoma apfuura kambani yakazivisawo kuuya kwemamwe mabhande, Apple Watch yakasarudzika (ine zviyeuchidzo kumashure) uye kufona kune vese vashandisi vane hukama nemwedzi uno weBlack Nhoroondo kupemberera. KuApple vanobatanidzwa zvizere nazvo uye zvinoita sekudaro iyi mhemberero ichave imwe yeaya anogara nesu zvachose.
Apple inofanirwa kuramba ichikurudzira kufamba kwevashandisi vane iyo Apple Watch uye inofanirwa kuramba ichitsigira kuenzana pazvinhu zvine hukasha senge rusaruraganda. Ehezve, zvinoita senge yakanaka kwazvo nzira yekuratidza nyika mhando yekambani iwe yauri uye mupfungwa iyi tinofara kuti ndizvo. Ipapo ichave iine zvikamu zvayo zvisina kunaka, zvisarudzo zvisirizvo kana zvimwe zvakadaro, zviri pachena kuti haisi kambani yakakwana.
Iye zvino avo vashandisi vanoda kuwana iyi medal yakasarudzika uye mamwe masitikita ekutumira muMessage kana FaceTime ikozvino vanogona kuisa mabhatiri uye kutanga kufamba kweinenge vhiki. Pamwe nenzira iyi vanojaira uye nenzira iyi ramba uchirovedza muviri kwenguva yakareba kuti ugare wakakwana sezvinobvira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Unity Dambudziko rave kuwanikwa paApple Watch
Iwe unogona ikozvino kunakidzwa neGeForce Zvino paMacs ine M1 processor nekuda kweChannel
Apple inotora kodzero kuCODA nekubhadhara rekodhi huwandu